Global Voices teny Malagasy » Samy manana ny tatitra ataony ny fampitam-baovao Frantsay sy Anglisy mikasika ny fihetsiketsehana ao Alzeria. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Avrily 2019 5:42 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika (en) i Catherine (Kate) Randall, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Alzeria, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Mpanao fihetsiketsehana tany Blida, Alzeria, ny 10 martsa 2019, avy amin'i Fethi Hamlati. Nahazoana alalana avy amin'ny CC BY-SA 4.0. Protesters in Blida, Algeria, on March 10, 2019, by Fethi Hamlati. Used with permission via CC BY-SA 4.0.
Fanamarihan'ny mpamoaka: Hatramin'ny namoahana voalohany ity lahatsoratra ity, nametra-pialana tamin'ny fomba ofisialy tsy ho filoha intsony ny filoha Alzeriana Bouteflika.
Hatramin'ny 16 Febroary 2019, nanakorontana an'i Alzeria ny hetsi-panoherana satria manohitra ny firotsahan'ny filoha Abdelaziz Bouteflika hofidiana filoham-pirenena amin'ny fe-potoam-piasana fahadimy ny olom-pirenena. Ny 11 Martsa, nanambara i Bouteflika fa tsy hirotsaka indray izy.
Nanomboka teo dia nitohy ny fanoherana goavana miely patrana. Mandritra izany, nanambara ny governemanta fa hisy ny fihaonambe iraisam-pirenena hatao mba hamaritana lalàmpanorenana vaovao izay mety hamela an'i Bouteflika hanitatra ny fe-potoam-piasana fahaefatra, izay hifarana amin'ny 27 aprily 2019. Niteraka fanoherana avy amin'ny mponina ao amin'ny firenena izany fanitsiana izany manoloana ny disadisa tsy mitsaha-mitombo noho ny voka-pifidianana tsy azo antoka.
Niteraka fanazavana isan-karazany momba izay mety hitranga izany fisalasalana izany. Ny haino aman-jery tandrefana, izay taitra tamin'ny hetsi-panoherana tsy mbola nisy toy izany, miezaka mamantatra ny antony mahatonga ny Alzeriana hidina an-dalambe.
Na izany aza, mampiasa fomba fiasa samihafa tanteraka ny fampitam-baovao amin'ny teny Anglisy sy amin'ny teny Frantsay, indrindra fa tamin'ny fampiasana teny lehibe manokana hita ao amin'ny Media Cloud, sehatra tovozona malalaka (open-source) ho an'ny fandalinana ny tontolon'ny fampitam-baovao.
Ahafahana manisa, manombatombana, ary manatsara ny fitantarana ataon'ny fanaovan-gazety momba ny hetsi-panoherana arakaraka ny toerana ara-jeografika na ny fiparitahan'ny fiteny manerantany ny Media Cloud . Manamafy ny fahasamihafana eo amin'ny fitantarana momba an'i Alzeria ny Media cloud.
Ny 16 ka hatramin'ny 26 martsa 2019, 0,1% hatramin'ny 3.4% ny isanjaton'ny lahatsoratra momba ny hetsi-panoherana ao Alzeria.
Fitateram-baovao momba ny fihetsiketsehana ao Alzeria amin'ny vaovao amin'ny teny Anglisy tamin'ny alàlan'ny Media Cloud.
Nandritra io fotoana io ihany, ny isanjaton'ny lahatsoratra amin'ny haino aman-jery Frantsay miresaka ny hetsi-panoherana dia 0.4% hatramin'ny 4.5%. Marina fa manana andraikitra lehibe amin'ity fisiana elanelana ity ny rohy ara-tantara amin'ny maha-zanatany Frantsay an'i Alzeria. Mba hametrahana ny fifamatoran'ireo firenena eo amin'ny tontolon'ny zava-misy, dia lasa zanatanin'i Frantsa tamin'ny taona 1830 i Alzeria tamin'ny nananiham-bohitra an'i Algers ary nijanona ho zanatany hatramin'ny taona 1962, teo ambanin'ny rafitra governemanta isan-karazany. Nahazo fahaleovantena i Alzeria taorian'ny ady nihoso-drà naharitra ela nanomboka tamin'ny taona 1954 ka hatramin'ny taona 1962 izay namela holatra marobe. Na izany aza, mbola betsaka ihany ny elanelana eo amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Anglisy sy amin'ny teny Frantsay momba ny fitantarana ny hetsika Alzeriana farany:
Fomba fandrakofan'ny media momba ny fihetsiketsehana ao Alzeria amin'ny vaovao amin'ny teny Frantsay amin'ny alàlan'ny Media Cloud.
Ny fahasamihafana lehibe hafa dia heverina ho “tsy dia tokony hanintona loatra” ao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Anglisy ny zava-miseho any Alzeria raha ampitahaina amin'ny fampahalalam-baovao frantsay.
Ohatra, mampiseho ny angon-drakitra Google Trend fa manerana izao tontolo izao, ny ampahany amin'ny fikarohana ny teny lehibe “Algeria protests” dia ambany lavitra noho ny ampahany amin'ny fitadiavana ny “Manifestations Algérie”, mitovy aminy amin'ny teny Frantsay – tsy resahana intsony ny zava-misy fa marobe kokoa ny mpiteny Anglisy noho ny mpiteny Frantsay manerana izao tontolo izao.
Kamel Daoud, mpamakafaka ao amin'ny Point sy Le Quotidien d'Oran, na ny Oran Daily, nanoratra fa tsy maintsy manafaka ny tenany amin'ny fitsarana an-tendrony ataon'ny fampitam-baovao vahiny  i Alzeria.
Ambonin'ny zava-drehetra, miharihary ny zava-misy mampalahelo: tsy afaka amin'i Frantsa isika raha toa ka tena zava-dehibe amintsika ny fanehoan-keviny, mba hanosika antsika hikorontan-tsaina na ho nasionalista (…) Manaporofo zavatra iray ihany ny mangataka, mitaky, mitabataba momba ny adidy amin'ny fankatoavana na manameloka ny tsy fahalalana: tsy mbola afaka tanteraka sy mahavita fahafahana isika. Tsy afaka hiorina amin'ity fiankinan-doha ity, na amin'ny fanagadrana an-tsitrapo amin'ny fangatahan'ankizy ho amin'ny “rariny” manerantany ny firenentsika.
Indreto ireo teny lehibe voalohany ampiasaina matetika amin'ny haino aman-jery amin'ny fiteny Anglisy momba ny lohahevitra hetsi-panoherana Alzeriana:
Amin'ny teny Frantsay anefa, ny zavonteny mifandraika amin'ireo teny lehibe ireo dia tsy mitovy mihitsy amin'ny zavonteny amin'ny teny Anglisy:
Word cloud ho an'ny fampitam-baovao amin'ny teny Frantsay momba ny hetsi-panoherana ao Alzeria tamin'ny alàlan'ny Media Cloud.
Manantitrantitra ny olana momba ny fe-potoam-piasan'ny filoha sy manasongadina ny zava-misy miaraka amin'ny hetsika ao Frantsa sy ny fampiharana ny lalàna ny loharanom-baovao amin'ny teny Frantsay. Ireo tranonkala teny Anglisy kosa etsy ankilany mampifandray ireo zava-mitranga amin'ny fifidianana ho avy, manonona an'i Trump, Venezoela ary Sodàna.
Tao amin'ny New York Times, naneho hevitra momba ny famihinan'ny vondrona mitokamonina amin'ny fahefana ao Alzeria i Adam Nossiter, nanonona mpanao fihetsiketsehana izay namaritra ny governemanta ho “toy ny fokom-pianakaviana .” Ao amin'ny Al Jazeera, Youcef Bouandel indray mametraka an'i Alzeria amin'ny toe-javatra tamin'ny Lohataona Arabo tamin'ny taona 2010 . Ho an'ny BBC, Ahmed Rouaba nisafidy hifantoka momba ny fiantraikan'ny tambajotra sosialy .
Nokarakaraina tao amin'ny media sosialy ny fihetsiketsehana – ary raha ny fikasan'i Bouteflika hirotsaka hofidiana indray no anton'ny hetsika, dia naseho ihany koa ny hatezerana momba ny kolikoly lalim-paka eo amin'ireo sangany ao amin'ny fitondrana.
Nahitana fitantarana hafa ny gazety amin'ny teny Frantsay.
Tao amin'ny New Obs, nanoratra momba ny fahanginana hafahafa teo amin'ny governemanta frantsay nandritra ny korontana i Pierre Haski. Ho an'ny France 24, nandinika ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina i Marc Daou: ao Tonizia, mihevitra ny governemanta fa “manan-jo haneho ny heviny ny vahoaka Alzeriana “, raha tany Maraoka kosa, araka ny nolazain'i Daou , “marobe ireo Maraokana nandray tamim-pifaliana izay heverin'izy ireo fa fialàn'ny filoha Alzeriana manoloana ny tanoran'ny firenena. “
Raha fintinina, dia toa niverina tamin'ny fitantarana mahazatra (efa napetraka tsara) ny gazety amin'ny teny Anglisy, raha miezaka mijery ny zava-misy mivoatra hatrany izay misy fiantraikany mazava ao amin'ny faritra ny fampitam-baovao amin'ny teny Frantsay.
Notohanan'ny fanadihadiana mafonja sy fitantarana goavana ataon'ireo mpanao gazety Alzeriana izay eo an-toerana ary afaka manome fomba fijery hafa kokoa momba ny fihetsiketsehana ny fomba fijery maro kokoa ao amin'ny fampitam-baovao amin'ny teny Frantsay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/18/137039/
 ady nihoso-drà naharitra ela : https://en.wikipedia.org/wiki/Algerian_War
 fitsarana an-tendrony ataon'ny fampitam-baovao vahiny: http://www.lesemeurs.tn/LectureZen.aspx?ID=6731#.XKW2zJhKiUk
 toy ny fokom-pianakaviana: https://www.nytimes.com/2019/03/15/world/africa/algeria-protests-bouteflika.html
 Lohataona Arabo tamin'ny taona 2010: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/algerians-learned-lessons-arab-spring-190305111758425.html
 tambajotra sosialy: https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-47414556
 fahanginana hafahafa : https://www.nouvelobs.com/chroniques/20190312.OBS1599/france-algerie-un-devoir-de-non-indifference.html
 manan-jo haneho ny heviny ny vahoaka Alzeriana: https://www.france24.com/fr/20190313-crise-bouteflika-algerie-inquietude-mutisme-maroc-tunisie-sahara-occidental